MARAQA KAABAJKA CASIIRKA: INTA JEER EE AY CAYAYAANKU KU NOOL YIHIIN IYO SIDA AY U QUUDIYAAN, SAWIRADA IYO FIIDIYOWYADA - BEER CAGAARAN
Cadowga quruxda badan ee beertaada: Kaabashka kabaha
Kabuubyada kaabajka ayaa yaqaan qof walba oo ka soo jeeda caruurnimaduna waxay la xiriirtaa guga - sida ugu dhakhsaha badan qorraxdu waxay billaabmaysaa inay si fiican u diiriso dhulka, cayayaanka ayaa soo baxaya. Sababtoo ah midabka - cadaan leh dhar madow - waxaa sidoo kale loo yaqaan white.
Si kastaba ha ahaatee, balanbaalku ma sameeyo qof kasta oo faraxsan - cayayaanka quruxda leh ee aan qurux badnayn ayaa keena waxyeelo weyn oo soo wajahda dalagyada, sidaas darteed muuqaalka muuqaalkiisa ee bannaanka iyo bannaanka waa calaamad muujinaysa. Sida loo badbaadiyo dalagga ka soo cayayaanka iyo sida looga hortago muuqaalka dhirta kaabajka beertaada?
Cayayaanka quruxda badani waa tan ugu caansan. ee Bariga Yurub iyo Afrika.
Cabbirga barafka wuxuu kala duwan yahay 50 illaa 60 mm, baalasha cad, oo leh madow madow. Waxay si weyn u ekaataa repn, kaliya ka weyn iyada. Dabeecadda duulimaadka ballaadhanka waa mid aan simanayn, degenaansho, isla markiiba waxay isku laabtaa baalasheeda, iyadoo ay sabab u tahay midabka huruudka ah ee qaybta hoose ee baalasheeda, waxay weli u muuqanaysaa shimbiraha. Guryaha cayayaanka waa caleen iyo beero, gaar ahaan, sida magaca la sheegayo, dalagga kaabajka ah iyo dhirta kale ee qallalan.
Maxaa cuno maraq cadho ah? Intaa waxaa dheer in kaabajka, balastirku wuxuu daboolayaa dabocase, rapeseed, dabocase, malayga, khaldi, mararka qaarkood nasturtium, capers iyo toonta waxaa sidoo kale ku xanuunsado.
Kaabashka Boorash laga sameeyey nadiifi dhulka hoostiisa. Balastoorka waxaa loo tixgeliyaa cayayaan xaasidnimo - hal shakhsi keliya waxaa laga yaabaa in ay qiyaasaan 300 oo dirxi ah marka loo eego celceliska, iyo xaaladaha wanaagsan, ilaa 600. Ka dib markii looxyada ee Baalallay maamushaa shaqadooda beerta, caleemaha kaabajka badan yihiin sida xargaha.
Pupae iyo rater
Haweenka kaabaju waxay qabtaan jiilaalka, laga bilaabo halka ay ka baxaan bisha Abriil - Maajo, marka cimiladu qorraxdu ku jirto banaanka. Dufanka ayaa ukumo ukun ah oo midabkiisu jaale ah oo jaale ah oo caleemo ah iyo caleemo kale, iyo sidoo kale haramaha. Soontahiisa ayaa midabkiisu jajab yahay, 4 cm oo dherer ah, oo leh 16 lugood. Waqti ka dib, markay koraan, waxay u beddelaan midab cagaaran, oo leh buluug ah buluug, oo leh dhibco jaale iyo madow dhinaca dhinacyada iyo dhabarka.
Meeqa ayay tahay haweeneyda kaabajka casaanka ah? Rugta yar ee kaabajka ah waxay ku dhuumataa subaxda caleemaha, waxay caleemaha ku dhexjiraan bartamaha, ka dibna u dhaqaaqaan kooxo dibedda ah waxayna bilaabaan inay dhirbaaxaan caleemaha. Midabada dhalaalaya waxay ka ilaalisaa shimbiraha, ka digtoonow in cayayaanka ay sumeeyaan. Gawaarida waxay ku noolyihiin dhowr toddobaad, inta lagu jiro waqtigan guska ku saabsan 3-4 jeer.
Sida ugu dhakhsaha badan sida rinjiga u cunaan iyo koraan ilaa 40 mm, waxay ka tagaan dhirta gnawed iyo u guurto deyrka, laamaha qalalan, jilif, derbiyada dhismayaasha halkaas oo ay ku dhashay. Horeba waxaa laga soo xigtey buuggan cusub oo dhicis cusub soo baxaya, iyo mawjada labaad ee duullaankii cayayaanka kuwan caleemaha bilaabay.
Sida loo ilaaliyo beerta laga bilaabo muuqaalka cayayaanku?
Caadi ahaan, inta lagu jiro xilliga diiran, geedka kaabajka wuxuu leeyahay laba jiil waqti ku filan si uu ugu noolaado, koonfurta - saddex.
Kadib marka la barbardhigo kalluunka ugu horeeya ee ka soo baxa ardaygii aadka u sarreeyey, oo marka hore, ukumo, waxay qaadataa dhowr bilood.
Inta lagu jiro waqtigan, siisay koraan, geeddi-socodka ardaygu wuxuu dhacayaa bisha Juunna jiilka labaad ee kaabajka ah ayaa ka muuqda. Haddii xilliga kuleylku diiran yahay - ka dibna cayayaanka la socdo illaa Oktoobar, maaraynta inay ku noolaadaan wareegga saddexaad.
Waa muhiim! Marka ugu horeysa ee caleemaha waa bisha Abriil - Maajo. Si looga hortago musuqmaasuqa mustaqbalka ee beergooyska leh kaabajka mustaqbalka, waa lagama maarmaan guga si looga hortago ka hortagga cayayaanka.
Dufcadaha waxay u diyaarsanaan dillaacaan iyo hareeraha madow ee dhismooyinka beerta, xayndaabyada, waxay ku fuuli karaan hoostooda geedo jir ah, on laamood qalalan oo duurka. Ka hor intaan cagaarka ka tagin hoygooda, waxaa lagama maarmaan ah in la nadiifiyo caleemaha dhirta, baaro xayawaanka iyo dildilaaca, deyrka iyo darbiyada dhismayaasha leh jet ka adag biyaha tuubada waraabka.
Pupae oo ah baro baro huruud ahoo leh dhar madow. Nidaamka nadiifinta ma siin doono boqol boqolkiiba damaanad in maraq kaabuhu uusan bilaabi doonin inuu u duulo beerta bisha May - laakiin wuxuu caawin doonaa si aad u yareeya dadka cayayaanka ah. Meelaha dufan ee dillaacsan ayaa si fiican loo nadiifiyaa.
Waxaa lagama maarmaan ah in laga soo saaro haramaha daaqa ka soo jeeda dhammaan dhulka beerta khudradda iyo beerta si haboon. Tusaale ahaan, bacda shandada, suxuunta iyo yarutka waxay jecel yihiin cayayaankaas.
Maxay tahay maraq kaabajka maraq kalluunka ah? Si looga hortago waxyeello dalagga oo dhan marka cabbitaanku u muuqdo, waxaa lagama maarmaan ah in lagu beero radishes, qulqulka, gumeysiga, kaabajka iyo dabocase si gooni gooni ah oo ka mid ah. Laakiin waxaad ku dhajin kartaa marigolds, valerian, beeyo liin, karootada, dhir iyo dill - ma jecla balastarka cad cad oo u adeega sidii cabsida.
Marka lagu daro kabuubyada kaabajka ah, cayayaanka kale ee cayayaanka ayaa sidoo kale khatar ku ah beerta. Kuwani waa kuwan ugu waaweyn: aboorka yaanyo, duudduubka dabacasaha, malafka cagaaran, qaxwaha, maqaarka, sawfly geed, slugs, baradho baradhada, caarada caarada, aboorka lafaha leh.
Maxaa la sameeyaa haddii uu dego beerta?
Nasiib darro ma jirto taxadar aad ka ilaalineyso dhicin, kaas oo kuu duuli doona qof kale beerta. Maxaa la sameeyaa haddii cayayaanka halista ah la ogaado?
Meelaha yar ee dalagyada waxaad yeeli kartaa cayayaanka gacanta oo isticmaali kartaa hababka caanka ah.
Haddii aagga beeritaanka uu yar yahay, ka dibna kormeer joogto ah, waxaad gacanta ku dhigi kartaa ukumaha la dhigay ee kaabajka iyo lafa-xayiray oo ah kilyaha. Badanaa waxaa laga heli karaa qeybta hoose ee xaashida. Inta badan, marka lagu daro sawirada shimbiraha ah ee kor ku xusan, waxay kuxiran yihiin muraayadaha suufka ah ee loo yaqaan "suufka" - iyaga oo aan u baahnayn inay taabtaan. Si deg deg ah, cadowgoo ah Baalalliyo kaabajka iyo caawiyayaasha bannaanka ayaa ka qaban doona iyaga.
Caleemaha khatarta ah ee beerta waxaa lagu xoqin karaa sharoobada qarada leh ee khamiir leh, iyaga oo ku daadinaya taarikada ama daboolka iyo ku daboolida dabinka kaabajka iyo qoryaha kale.
Si looga hortago dhicida lugta ee ukumaha ukunta, waxaa lagama maarmaan ah in la qariyo sariiraha.
Maraq kaabash ayaa si fiican u caawiyay geedo dabiici ah, oo aad u baahan tahay inaad ku buufiso khudradda toddobaadkii hal mar.
Maraqyada wax lagu sameeyo waxay sida caadiga ah diyaar u yihiin si fudud, iyo maaddooyinka waxaa laga heli karaa beerta ama dukaanka kuugu dhow.
Mid ka mid ah xalalka ugu fudud waxa weeye in lagu daro tincture valerian (1 dhalo) iyo saddex litir oo biyo ah;
Wixii qaacidada labaad, mid ayaa u baahan doona ash qoryaha, 0.5 l. Waa lagama maarmaan in la isku walaaqo baaldi biyo nadiifa ah, ka dib marka xalku ka soo baxo - dareeraha dareeraha cad, ku dar 2 qaado oo saabuunta dareeraha ah isla markaana si fiican u walaaq;
laga bilaabo qalooca, yar yar iyo gooryaanka waa la karin karaa decoction wanaagsan. Si arrintan loo sameeyo, ku shub biyo karkaraya dhirta 1: 3 kuna adkeyso maalmo badan. Waxay ku sii jirtaa oo kaliya in ay cadaadiso oo buufiyo dhaqanka.
Iyada oo la jabiyo aagagga waaweyn ee cayayaanka, iyo sidoo kale dad badan oo cayayaanka ah, waxaad isticmaali kartaa diyaarinta kiimikada. Xalalka wanaagsani waa sida "Karbofos", "Fitoverm", "Bitoxibacillin", "Kinmiks", "Aktelli", "Lepidotsid".
Digniin! Waxaa ugu wanaagsan in la sameeyo daaweynta marxaladda hore ee caleen-samaynta, sidaa daraadeed dhirta ka dibna uma soo jiidanayso macdanta kiimikada.
Dawooyinka bakteeriyada, sida "Fitoverm" ayaa loo isticmaali karaa inta lagu jiro horumarinta khudradda, waxayna dhammaataa ka hor goosashada.
Kaabashka Butterflies Sannad kasta waxay gooyaan beeraha iyo dalagyada - Si kastaba ha ahaatee, markaad baraneysid sida loo saxo tallaabooyinka ka hortagga, iyo sidoo kale dooranaya habka loo maareynayo khudaarta ee ugu waxtar leh xaalad gaar ah, waa inaadan ka welwelin dalagga marka cayayaanku soo baxayo.
Ma aha oo kaliya dhicin iyo cayayaanka kale waxay keeni karaan waxyeelo aan loo baahnayn in la beerto. On our site waxaad ka heli kartaa macluumaad faa'iido leh oo ku saabsan cayayaanka kale ee beerta.
Akhri dhammaan wixii ku saabsan jiirka duurjoogta ah, jeexjeexa, jiirarka, jiirarka iyo jiirarka, gaffers, xayawaanka duurjoogta ah. Iyo sidoo kale siyaabaha loola dagaallamo wireworm, laan, cadaan, sawfly iyo duulis.